1 Sidee baan ku soo celin kartaa My kharribeen Files?
Hi, shalay markaan isku dayey inaan u furo sawirada qaar ka mid ah ee aan ku computer, waxaan ogaaday inaan iyaga ma furi karaa. Waxay dhammaan u kharribmay. Ma aqaano waxa ka khaldan laakiin runtii waxaan iyaga u baahan tahay dib. Fikrado kasta? Thanks.
Faylal ay la khilaafo karaa sabab u ah nidaamka shil weerar, virus ama qalliin qaldo. File A kharribeen had iyo jeer waa istimaalaynin oo si fiican u shaqaynayn. Marka soo food saartay arrintan, in aad marka hore isku dayi kartaa in ku dhiso ama isku dayaan in ay maamulaan barnaamijka la ogaado fayras. Haddii ay dhacdo in qaar ka mid ah tani laba xal caawiyo. Si kastaba ha ahaatee, haddii aanay shaqayn, waxaad isku dayi kartaa barnaamijka xogta saddexaad-qayb ka mid ah in la soo celiyo files kharribeen.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa barnaamij soo kabashada xog ah oo awood aad si loo soo celiyo photos kharribeen, videos sidoo kale document files. Sidaa daraadeed, waxaad soo celin karo files kharribeen in weelna ama la tirtiro ka Recycle Bin ama in laga badiyay ay sabab u tahay weerar fayras, nidaamka shil ama xijaab formatted. Currently Wondershare Data Recovery waa ay awoodaan in ay soo celiyaan photos kharribeen, videos, music, document files, iwm
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ah ka dibna bilowdo in la soo celiyo files kharribeen.
2 3 Talaabada soo celinta kharribeen Files
Halkan waxaan ku qaadan Wondershare Data Recovery for Windows sida tusaale. Users Mac karaa download version Mac iyo soo celiyo files kharribmay oo talaabooyin la mid ah.
Tallaabada 1 Select Recovery Mode soo celinta kharribeen Files
Ku rakib iyo abuurtaan Wondershare Data Recovery on your computer, waxaad arki doontaa interface ah sida hoos ku soo bandhigay. Halkan waxa aad waxaa la bixiyaa iyadoo 3 hababka soo kabashada. Si loo soo celiyo files kharribeen, halkan waxaan isku dayi "Recovery ah Barzakh," wada.
Tallaabada 2 Select ah Barzakh, si Sawirka
In tallaabadaas, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan Risaalo in files kharribeen dhig oo guji "Start" in iskaan.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonayso in la soo celiyo files laga aalad lagu kaydiyo dibadda, fadlan xiro qalabka aad la computer dooro drive adag.
Tallaabada 3 baartaa faylasha Restorable iyo bilow soo celinta
Scan ka dib, dhammaan faylasha helo waa la qori doonaa qaybaha ama waddooyinkiisa asalka ah. Waxaad ku eegaan karo files qaar ka mid ah sida sawiro. Waxa kale oo aad eegi kartaa haddii helay files yihiin waxa aad doonayso in la soo celiyo ama aan la magacyadooda asalka aad.
Markaas waxaad dooran kartaa faylasha aad rabto in la soo celiyo oo guji "Ladnaansho" in ay dib u badbaadin si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Ha badbaadin file soo celiyay daafaca si ay waddada asalka ah. Haddii kale ma laga yaabaa in aad noqon si aad u soo celin awood.
1 Haddii faylasha aad ayaa loo macquul ah waxyeelo, waxaad iyaga ma soo celin karo.
2 Haddii "Recovery ah Barzakh," caawin waydo, waxa kale oo aad isku dayi kartaa "ceeriin Recovery" mode.
Waa maxay iyo Sida loo dayactir Error Faultrep.dll
> Resource > Utility > celinta kharribeen Files: 3 Talaabada soo celinta kharribeen Files